Indlu yedolophu epholileyo yaseRanelagh (ikhaya levegan)
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguAoibhinn
Le ndlu incinci kodwa ithokomeleyo yasedolophini yindawo yokugibisela ngamatye isuka kwilali yaseRanelagh, enezitolo ezinkulu, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, ijimu, icinema yobugcisa, ipaki, njl.njl. Emazantsi esixeko, ikhuselekile kakhulu. Indawo ngokubanzi, eneentsapho ezininzi ezihlala kufutshane, kwaye kukuhamba nje imizuzu engama-20, okanye imijikelo emi-5 ukuya kweli-10 ukuya kumbindi wesixeko. I-tram ye-Luas, ehlala rhoqo, yimizuzu emi-3 yokuhamba ukusuka endlwini, kwaye iya kukungenisa esixekweni ngaphantsi kwemizuzu eli-10.
Indlu ihonjiswe ngesitayela saseSweden kunye nesincinci kuyo yonke indawo, kwaye zonke ziyilwe ngokucokisekileyo ngentuthuzelo kunye nokusebenza kwengqondo.
Sicela zonke iindwendwe ukuba zikhumbule ukuba le yindlu ekwabelwana ngayo, kwaye ngelixa siyigcina icoceke kakhulu, ayisoze ingabinabala.
IRanelagh yindawo entle kakhulu, ekhuselekileyo kwaye etyebe kakhulu, enezakhiwo ezininzi ezintle zaseGeorgia. Kufuphi esixekweni, kodwa sinesandi esikhethekileyo. Ikufuphi nelali yaseRathmines, eneziko lokuthenga, iivenkile zempilo, iikhefi, iicawe, ithala leencwadi, indawo yokuqubha kunye nejimu (hlawula njengoko usiya), njl. I-RDS, iHolo yeKhonsathi yeSizwe, iCroke Park, i-Aviva Stadium, iWhelans, iVicar St, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Aoibhinn
Ababuki zindwendwe bajonge ukukunika indawo yobuqu kangangoko ufuna, kwaye, nanini na ixesha livuma, bayakuvuyela ukunxulumana nabo bathanda intsebenziswano ngakumbi. Siyavuya ukunika iingcebiso kwaye sincede kangangoko sinakho. Nceda unxibelelane ngokucacileyo naziphi na iimfuno kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nazo.
Ababuki zindwendwe bajonge ukukunika indawo yobuqu kangangoko ufuna, kwaye, nanini na ixesha livuma, bayakuvuyela ukunxulumana nabo bathanda intsebenziswano ngakumbi. Siyavuya ukun…